Maalinta: Al-Qariah & At-Takathur iyo Masiixa - Injiilka oo ku qoran af-soomaali
Maalinta: Al-Qariah & At-Takathur iyo Masiixa
Surah Al-Qaryaah (Surah 101-bahalnimada) waxay ku tilmaamaysaa Maalinta Qiyaame ee soo socota sidan:
Qaarica maxay tahay.Mase taqaannaa Qaarico.Waa Maalinta Dadku noqon sida Baalallay.Buuruhuna ay noqon sida Suuf kala firdhay.Ruuxiise miisaankiisa (fiican) cuslaado.Wuxuu ku noolaan nolol raalli ah.Ruuxiise uu fududaado Miisaankiisa (fiican).Wuxuu u hoydaa (Naarta) Haawiya.
Al-Qaryaah 101: 2-9
Suuradda Al-Qaryaah waxay noo sheegaysaa in kuwa leh miisaan aad u culus oo camal wanaagsan ay rajayn karaan inay wanaagsanaadaan Maalinta Qiyaame.
Laakiin ka warran annaga oo dheelitirka camalka wanaagsani yahay mid fudud?
Suuradda At-Takathur (Surah 102-Xifaaltanka Adduunyadu wuu Kordhaa) ayaa noo digaysa
Waxaa idin shuqliyay Dadow wax badsasho (iyo isu faanid),Intaad Xabaalaha ka tagtaan (dhimataan).Saas ma aha ee waad ogaandoontaan.Haddana saas ma ehee waad ogaandoontaan (Faanka cidhibtiisa).Haddaad dhab ahaan wax u ogtihiin (Waad dayn lahaydeen xumaanta).Dhab ahaan baad u arkaysaan (Naarta) Jaxiima,Ka dibna waxaad u arkaysaan Nartaas si yaqiin ah. Waxaana laydin warsan Maalintaas Nicmadii
.At-Takathur 102: 1-8
Suuradda At-Takathur waxay noo sheegaysaa in Naartu ay noo hanjabto Maalinta Qiyaame markaas oo ‘naloo weydiin doono’.
Ma u diyaar garoobi karnaa maalintaas haddii dheelitirkayagii camalka wanaagsan uu ahaa mid fudud?
Ciise Masiix wuxuu si gaar ah u yimid si uu u caawiyo kuweenna leh dheelitirnaan yar oo ah camalka wanaagsan. Wuxuu Injiilka ku yiri
Yooxanaa 6: 35-51
Ciise Masiix wuxuu ku andacooday inuu ‘samada ka soo degay’ oo uu siin doono ‘nolosha weligeed ah’ qof kasta oo isaga rumaysta. Yuhuuddii isaga dhegaysatay waxay weyddiisteen inuu caddeeyo amarkan. Nebigu wuxuu tixraacay nebiyadii hore ee wax sii sheegay imaatinkiisa iyo awoodiisa. Waxaan arki karnaa sida Tawreedka Muuse u saadaaliyay imaatinkiisa iyo waliba nebiyadii Muuse ka dib. Laakiin maxay ka dhigan tahay ‘isaga rumaysta’? Waxaan halkaan ku eegnaa.
Ciise Masiix sidoo kale wuxuu tusay awoodiisa calaamadaha bogsashada iyo dabeecadda. Wuxuu ku sharraxay waxbaristiisa
42 Qorniinku miyaanu odhan, Masiixu wuxuu ka iman doonaa farcanka Daa’uud iyo tuuladii Beytlaxam oo Daa’uud joogay?
Yooxanaa 7: 14-44
Biyaha nool ee uu ballanqaaday wuxuu ahaa Ruuxa, oo yimid Bentekoste, oo hadda siiya Nolosha si xor ah oo inaga gaashaamanaysa dhimashada Maalinta Xukunka. Waxaan u baahanahay oo kaliya inaan qirno haraadkeena.
Tags:al-qariahat- takathurisa al masihmaalinta qiyaamahasuurada 101suurada 102suurada al qariahsuurada at takathuur.